Ny fomba ahafahan'ny teknolojia manatsara ny fizotran'ny fandraisanao mpiasa - Victor Mochere
Ny indostrian'ny fandraisana mpiasa sy ny HR dia mivoatra haingana, indrindra amin'ny resaka fisarihana, fanombanana ary fandraisana mpiasa mendrika. Ny mpiasan'ny HR tsirairay dia miezaka mametraka ny fihodinany manokana amin'ny hetsika isan'andro, ny asa mba hanamafisana ny fizotran'ny fandraisana mpiasa sy hanakarama kandidà kalitao. Noho izany, inona no fomba miavaka ataon'ny mpiasa amin'izao fotoana izao?
Mba hialana amin'ny fizotry ny fandraisana mpiasa lava sy sarotra ary lafo, dia mampiasa fitaovana sy teknolojia HR ny mpiasa mba hampitomboana ny vokatra, hanafaingana ny zava-drehetra ary hahita ny mpiasa mety amin'ny fotoana mety. Amin'ny fijerena ny fitomboan'ny fangatahana ho an'ny mpiasa mety, mety amin'ny asa amin'ny tsenan'ny kandidà, ekipa mpikarama mihena na voafetra ny haben'ny fikambanana tsirairay mampiasa vola amin'ny fitaovana sy teknolojia fandraisana mpiasa vaovao.
Andeha hojerentsika ny fifandraisan'ny teknolojia sy ny fandraisana mpiasa.
Fahatakarana ny filan'ny fandraisana mpiasa ary manoratra famaritana asa mahomby
Fikarohana sy fisarihana kandida
Tombana ny kandidà
Ny dingana voalohany amin'ny fizotry ny fandraisana mpiasa dia manomboka amin'ny fahatakarana ny filàn'ny orinasa amin'ny fandraisana mpiasa sy ny famantarana ny toerana banga eo amin'ny lafiny andraikitra sy andraikitra. Raha jerena ny lazan'ny orinasa (manakarama andraikitra samihafa manerana ny orinasa) na manokana (manakarama toerana iray manokana), ny fandraisana mpiasa dia mila mpiasa mba hamoronana famaritana asa mahasoa. Mifototra amin'ny fahalalana, fahaiza-manao ary traikefa takiana amin'ny andraikitry ny asa izany.
Ahoana no anampian'ny teknolojia amin'ny fanoratana famaritana asa mahomby?
Ny famaritana asa mahomby dia ampahany amin'ny marketing amin'ny fandraisana mpiasa. Fotoana iray hamoronana fahatsapana voalohany sy hifandraisana amin'ireo kandidà mety. Noho izany, mba hanafoanana ny mety ho very kandidà amin'ny fahatsapana voalohany, dia afaka mampiasa fitaovana mpandinika lahatsoratra. Ity fitaovana fandraisana mpiasa ity dia tsy vitan'ny manatsara ny famaritana asa araka ny filanao momba ny fandraisana mpiasa fa manao kajy ny fahombiazany ary mitazona ny fifandanjana amin'ny fiteny inclusive miaraka amin'ny algorithm mandroso. Ny famariparitana asa mahasarika sy mahatafiditra kokoa noforoninao, no mahabetsaka ny vondron'olona isan-karazany mahasarika anao.
Ao amin'ny tsenan'ny asa entin'ny kandidà amin'izao fotoana izao, dia tena ilaina ho an'ny mpikarama ny mahasarika kandidà manara-penitra. Amin'izao fotoana izao, tsy ny karama mendrika ihany no tadiavin'ny kandidà, fa mitady ireo lafin-javatra toy ny kolontsain'ny orinasa, ny soatoavina ary ny sehatra ho an'ny fampandrosoana matihanina. Ahoana ary no hisintonana ireo kandidà manara-penitra amin'ity lafiny fifaninanana ity? Fampiasam-bola amin'ny teknolojia fandraisana mpiasa mety izay afaka manampy anao amin'ny lafiny rehetra amin'ny fandraisana mpiasa mendrika ho an'ny fikambananao.
Ahoana no ahafahan'ny teknolojia manampy amin'ny fisarihana ireo kandidà?
Manana anjara toerana lehibe amin'ny fitadiavana talenta mety ny teknolojian'ny fandraisana mpiasa. Ny algorithm avoakan'izy io dia mamaritra ny mombamomba ny kandidà amin'ny Internet izay mitarika ho amin'ny fisarihana sy fitadiavana kandidà mavitrika ary koa ireo mpilatsaka ho fidina. Ny teknôlôjia fitadiavana mpilatsaka hofidina vaovao dia manampy anao hikarohana kandidà ivelany sy anatiny amin'ny alàlan'ny fisavana ny mombamomba an'ilay kandidà amin'ny Internet ao amin'ny rafitra fanaraha-maso ny mpangataka ary hamantatra ny lalao mety indrindra amin'ny fanokafana ny asanao ankehitriny. Tsy afaka nanao izany tamin'ny fomba marina sy haingana ireo mpikarama mpiasa sy ekipa mpikarama taloha. Saingy noho ny fampiharana ny fitaovana fandraisana mpiasa dia lasa mora ho azy ireo ny fisarihana sy ny fitadiavana talenta tsara.
Ny dingana manan-danja indrindra amin'ny fizotran'ny fandraisana mpiasa dia ny famantarana ireo kandidà mety sy mifanaraka amin'ny asa mifototra amin'ny fahaizany, ny fahalalany ary ny traikefany. Fa asa sarotra ho an'ny mpikarama ny manombatombana ireo kandidà mifototra amin'ny fahaiza-manao voalaza ao amin'ny resume na amin'ny alàlan'ny tafatafa an-telefaona. Na izany aza, ny teknolojia dia mivoatra haingana, ary misy sehatra fitiliana mialoha ny asa izay azon'ny mpikarama mpiasa sy ny mpitantana mpiasa hampiasaina hanombanana sy hanakarama mpilatsaka hofidiana haingana kokoa.
Ahoana no ahafahan'ny teknolojia manampy amin'ny fanombanana ny kandidà?
Ny teboka manan-danja indrindra amin'ny indostrian'ny HR dia ny fitomboan'ny mpangataka, ny fotoana sy ny fandaniana fomba fanombanana nentim-paharazana, ny loza mety hitranga amin'ny mpiasa mahantra, ary ny fiovan'ny mpiasa. Tahaka ny departemanta hafa ao amin'ny fikambanana iray, ny HR dia mila mamokatra sy manakarama talenta kalitao ho an'ny fikambanana. Ny teknolojia vaovao momba ny fandraisana mpiasa antsoina hoe fitaovana fanombanana ny kandidà dia afaka manampy azy ireo hanafaingana ny dingana sy hanombantombana ireo mpangataka mifototra amin'ny fahaizany miasa, ny toetrany ary ny fanjohian-kevitra lojika.
Betsaka ny tombony azo amin'ny fampidirana teknolojia amin'ny sivana na fanombanana ny kandidanao. Ny fanombanana ny fahaiza-manaon'ny kandidà miorina amin'ny Al dia manombana raha mifanaraka amin'ny asa sy ny kolontsaina mifanaraka amin'ny zava-bitany ny mpangataka. Manafoana ny mety hisian'ny fandraisana mpiasa ratsy izany amin'ny alàlan'ny fisavana ho azy, ny fanasokajiana ireo mpilatsaka hofidina ho anao.
Raha vantany vao manana talenta kalitao ao anaty siny ianao dia efa vonona amin'ny dingana farany amin'ny fandraisana mpiasa izay manadinadina sy manakarama mpiasa tsara indrindra ho anao. Ity dingana ity ihany koa dia ahitana ny onboarding sy ny fiofanana. Misy fomba isan-karazany amin'ny fanaovana dinidinika, saingy miankina amin'ny indostria, ny faritra ary ny anjara asany, ny mpikarama dia afaka misafidy fomba mety.
Ahoana no anampian'ny teknolojia amin'ny fanadinadinana kandida?
Tao anatin'ny folo taona lasa, ny teknolojia dia nanamora ny mpanadinadina sy ny kandidà hanao dinidinika amin'ny fomba samihafa sy ny fanadinadinana asa any amin'ny toerana samihafa. Ny resadresaka natao tamin'ny antso an-tsary dia hanampy anao amin'ny fomba tsara kokoa hanombanana ny kandidà iray rehefa manana lisitra lava be ianao.
Mety haneho toetra toy ny fahaiza-miresaka, feo, fitenin'ny vatana, ary fandraisana andraikitra izay tsy asehon'ny maro amin'ny telefaona sy CV. Ny fitaovana fanadihadiana video dia tsy vitan'ny hoe mandamina dinidinika, mamonjy ny fotoananao, fa mirakitra ny resaka, ary manome toerana hijerena azy amin'ny fotoana mety aminao. Amin'izao fotoana izao, orinasa maro no mampiasa chatbots amin'ny dinidinika amin'ny fanampiana amin'ny famaliana ny fanontanian'ny kandidà.
Ny teknôlôjia momba ny fandraisana mpiasa dia tsy teny tsotra fotsiny. Izy io dia efa lasa fepetra takiana ary mitana anjara toerana lehibe amin'ny fizotran'ny fandraisana mpiasa. Amin'ny fijerena ny fitakian'ny tsena mifaninana amin'izao fotoana izao, ny fikambanana dia mampiasa teknolojian'ny fandraisana mpiasa efa mandroso mba hampitomboana ny fahombiazan'ny fizotran'ny fandraisana mpiasa. Ny fitaovana fanombanana ny fandraisana mpiasa dia manangona, manangona ary mampita vaovao amin'ireo kandidà amin'ny fomba mora ary manafaingana ny fizotran'ny fandraisana mpiasa.
Ahoana ny fiantraikan'ny teknolojia manakorontana ny marika amin'ny mpampiasa